မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေဟာ စစ်အုပ်စုမြင်တဲ့ အာဏာနိုင်ငံရေး၊ ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေမြင်တဲ့ အပေးအယူဆွေးနွေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့သာမန်လူထုရဲ့နေစဉ်ဘ၀အခက်အခဲပြဿနာအရေး ဆိုပြီး ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်.. အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေအနေနဲ့ဦးနေ၀င်း အာဏာဆက်ခံယူချိန်မတိုင်မှီကတည်းက အလှည့်ကျ ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်သလို လက်ရှိလည်း အလှည့်ကျ တန်းစီနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အများကြီှးရှိနေပါတယ်.. ဒါတွေရဲ့နိဂုံးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဘ၀ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ဦးသန်းရွှေ တွေးမိပြီးသားဖြစ်မှာပါ.. ဦးသန်းရွှေအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော အန်အယ်ဒီပါ ဂရုစိုက်စရာမရှိပါဘူး.. တကယ်ပါ.. ဂရုစိုက်လိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ .. ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါ.. ယနေ့ အခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးနိုင်ပေမယ့် ဖိအားလျော့အောင် အကွက်ပြောင်းဖို့ ဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ တင်ပြီးတဲ့ ကိစ္စပါ.. သူကြောက်တာ သူ့ လူတွေပါ.. တန်းစီနေတဲ့ သူတွေကိုပါ.. အကြောင်းသိတော့ ပိုကြောက်ပါတယ်.. သူမှာ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေ အပိုင်သိမ်းထားပါတယ်.. သူ့ တမိသားစုလုံးက သုံးဖြုံးပြနေသလို ဆက်လက်လည်း သုံးဖြုံးပြနေအုံးမှာပါ..
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတကယ်ဖြစ်ရောလား? ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရင် သူဘာဖြစ်မလဲ.. သူ့ မိသားစုဘာဖြစ်မလဲ.. မကြာခင်မှာ အလှည့်ကျ စစ်ဗိုလ်ချူပ်တွေဖြစ်လာမယ့် သူတွေကရော သူ့ နဲ့သူ့ မိသားစု ကြမ္မာကို ဘယ်လိုဖန်တီးပစ်မှာလဲ.. ဒေါ်ကြိ်ုင်ကြိုင် သိပ်ကြောက်နေပါတယ်.. ဦးသန်းရွှေဟာ တချိန်လုံး သူ့ မယား. သူ့ သားသမီး. သူ့ မြေးတွေ ကောင်းစားရေးအတွက် တိုင်းပြည်ကို လက်ညိုးထိုးရောင်းပြသူပါ.. ဒါတွေအတွက် ဘာမဆိုမလုပ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် မလွန်ဆန်နိုင်တာ ဇရာပါ.. သူ အကွက်မပြောင်းရင် သူတို့ ဘ၀ဂျောင်းရတော့မှာပါ.. ဒါကြောင့် သူ တခုခုလုပ်ရတော့မှာပါ.. သူ နဲ့သူ့ မိသားစုဟာ ဦးနေ၀င်းလမ်း မရောက်ဖို့ ဘာလုပ်မလဲ? ကမ္ဘာက ပေးထားတဲ့ နိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းပြတယ်ဗျာ.. နိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းတော့ ကမ္ဘာက ဖိအားတွေပြင်းလာတာ ဆန်းသလားဗျာ.. သာမန်စဉ်းစားယုံနဲ့ ရပါတယ်.. ဖမ်းချင်တော့ရော ဒီလောက် သိပ်အလုပ်ရှုပ်ခံရလားဗျာ.. ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာလဲ.. ဦးသန်းရွှေရဲ့လုပ်ကြံမှုလား.. ဦးသန်းရွှေရဲ့နိုင်ငံရေးကစားတာလား.. သူတယောက်ထဲ ကစားတာလား.. ဘယ်သူတွေပါနေလဲ.. ကျနော်တို့ ကတော့ ဘယ်သိမလဲ.. ကာယကံရှင်မှ မဟုတ်တာ..
ဒါဖြင့် အပေးအယူပါတီနိုင်ငံရေးကရော.. ဘာတွေဆွေးနွေးကြမလဲ.. ဘာတွေပေးလို့ဘာတွေယူကြမလဲ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာမယ်.. ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အန်အယ်ဒီ ပါတီဝင်ပါလာမယ်.. အန်အယ်ဒီအနိုင်ရမယ်.. ဒီလိုဖြစ်မယ်လာဖို့ဦးသန်းရွှေနဲ့အပေးအယူလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ရော သူတို့ မိသားစုတွေကို ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ အခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးလိုက်မှာလား.. သူတို့ ရထားတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ငွေတွေ ပြန်သိမ်းခွင့်ရော ရှိတော့မှာလား.. ရှိမယ်ဆိုရင်ရော ဦးသန်းရွှေ ဒီလိုလုပ်ပါတော့မလား.. စဉ်းစားလေ ခေါင်းရှုပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေးပါ.. ဘန်ကီမွန်းကရော ဘာတွေ စေ့စပ်ပေးလိုက်မှာလည်း ဆိုတာလည်း စဉ်းစားရမှာပါ.. တချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလိုမလုပ်၇ဲပါဘူး.. လုပ်ရင်ပဲ မိုးပြိုတော့မလိုလို ပြောသူတွေလည်း အသံဝင်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်.. ဘာတွေဘယ်လိုလိုတွေးတွေး ကိုယ်ကျိုးကောင်းစားရေးပဲ လုပ်နေတဲ့ ဦးသန်းရွှေ ကိုလှုပ်မှ လှုပ်လာမယ့် နိုင်ငံရေးပါ.. ဒီလူကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရာထူးအနေနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုကလည်း တပ်မတော်အပေါ်သစ္စာဖောက်သလိုပါပဲ.. တပ်မတော်အပေါ်သစ္စာဖောက်တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ်သစ္စာဖောက်သလိုပါပဲ.. တပ်မတော်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံအကျိုး အမှန်တကယ်ကြည့်မှပဲ တပ်မတော်အမည်ခံလို့ ရမှာပါ.. ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း ဦးသန်းရွှေ သိမ်းနေတာမှ မပြောရဲမဆိုရဲမှတော့ သေနတ်ကိုင်ပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ.. ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးပါးပါးသွားပါပြီ.. တနေ့ နေ့၈၈၈၈လေးလုံး လူထုတော်လှန်ရေးကြီးမျိုးထက်ပိုပြီးများပါးတဲ့ လူထုကြီးလမ်းမပေါ်ထွက်လာရင် ဒီ ဦးသန်းရွှေမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက် တခုတည်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေ တပ်မတော်သားတွေ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာရအုံးမယ်.. ဦးသန်းရွှေကတော့ မြို့ တောင်ထပ်ပြောင်းရင်ပြောင်းနေလိုက်အုံးမှာပါ.. ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ဦးသန်းရွှေရဲ့လူတွေထပ်မံအပြောင်းအလဲတွေလုပ်လာရင် ဟိုနေရာပို့ဒီနေရာပို့ နဲ့နေရာမရဖြစ်ရအုံးမယ်.. ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာ အခုမှမဟုတ်ပေမယ့် ထပ်ပြီးဖြစ်မလာခင် ဦးသန်းရွှေကို တခုခုတော့ လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်.. မလုပ်ထားရင်တော့ ဒါတွေဖြစ်လာမှာ ဆန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ၂၀၁၀ အပြီး ဦးသန်းရွှေနဲ့မိသားစုက ဘယ်ဗိုလ်၊ချုပ် ကိုမှ ငဲ့မှာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ်လွှတ်ရုံးတော့မှာမို့ကျန်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကတော့ တပ်ကထွက်ပြီး သီးပင်စိုက်စားတာကမှ ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်..
Posted by သင့်ကင်း at 10:08 AM
It Did Happen in Burma - Record on Trial of DASSK ...